Islam ကို နားလည်ခြင်း (Part 3) Is the Quran Allah’s word? – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Islam ကို နားလည်ခြင်း (Part 3) Is the Quran Allah’s word?
Posted on March 4, 2009 April 28, 2009 by kyawkyawoo	Posted in islamTagged al Quran, allah, ကျမ်းမြတ်ကုရအန, ဂျူး, တမန်တော်မိုးဇက, လမ်းညွန်သစ္စာဖြစ်ကြောင, အစ္စလမ်ဘာသာ ကို နားလည်ခြင်း, ရေရှူ, burmese muslim, Burmese Muslims, chinese muslims, Holy Quran, Is the Quran Allah's word?, islam, Islam ကို နားလည်ခြင်း, islam. burmese muslim. myanmar muslim, myanmar muslim minority, myanmar muslim students, religion, understanding Islam
ပြီးခဲ့တဲ့ Post, Islam ကို နားလည်ခြင်း တစ်နဲ့နှစ်မှာ Islam ဘာသာဝင် မဟုတ်သောညီနောင်များ ကို Islam ရဲ့ အနှစ်သာရကို တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
အခုဆက်ရေးမဲ့အကြောင်း က Allah မှဖန်ဆင်းခံလူသားများ အတွက်
နောက် ဆုံးပိတ်ပြီးပြည့် စုံသော ကျမ်း အ ဖြစ်ပေးသနား ခဲ့သောကျမ်းမြတ်ကုရအန်သည် Allah ရဲ့ လူသားအားလုံးအတွက်လမ်းညွန်သစ္စာဖြစ်ကြောင်းကို အောက်ပ်ါခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှူ အတွက် အချတ်အလက်များကိ ဒေါက်တာဇာကီနိက်ရဲ့ Is the Quran Allah’s word? စာတမ်းမှမှီငြမ်း ပါတယ်။
ခေါင်းစဉ်မှာ ကုရအန် ကျမ်းသည် ဖန်ဆင်းရှင်၏ စကား (ဗျာဒိတ်) ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လူအများစုက အစ္စလမ်ဘာသာ၏ အစသည်တမန်တော်မိုဟာမက်(PBUH)ဟုလွဲမှားစွာထင် ကြသည်။အမှန် စင်စစ် အစ္စလမ်ဘာသာ သည်ကမ္ဘာဦးကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ဘာသာအယူဝါဒ ဖြစ်သည်။ ဖန်ဆင်းရှင် က ကမ္ဘာလူသားအား လုံးကို တမန်တော်များစေလွှတ်ပြီး
ထိုလူသားမျိုးနွယ်နှင့် ခေတ်ကာလနှင့် ကိုက်ညီသော သစ္စာတရား တော်များကိုဟောကြားစေခဲ့သည်။
တမန်တော်မိုးဇက(PBUH) လက်ထက် ဂျူး လူမျိုးများကိုမျိုးဖြုတ်မည့် ဖာရိုဘုရင် လက်မှ ကစဉ့်ကလျားပြေးရ သော ဂျူး လူမျိုးများကို
ကယ်တင်သည့်ပင်လယ်ကိုဖန်ဆင်းရှင်တန်ခိုးတော်ဖြင့် နှစ်ပိုင်းကွဲပြီး လွတ်မြောက်စေသော ဖြစ်ရပ်
ရေရှူ(PBUH) တမန်တော်၏ သေသူကို ရှင်ထစေသော ထူး ခြားသည့် ဖြစ်ရပ်များသည်ထိုခေတ်အခါကလူမျိုးနွယ်များ ကိုဖန်ဆင်းရှင်ကို
ယုံကြည်သူများ ဖြစ်စေခဲ့သော်လည်း ယနေ့ခေတ်လူသားများအတွက်ယုံရခက်သည့် ပုံပြင် များသဖွယ်ဖြစ်နေ ခြင်းက ဤအယူအဆကိုထောက်ခံနေပါတယ်။
အခုခေတ်မှာ Allah က တမန်တော်တဦးကိုစေလွတ်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ကို
ထက်ပိုင်း ခွဲပြပြီး ခဲ့ရင် သို့မဟုတ် သေသူကိုရှင်ပြန်ထမြောက်အောင်
လုပ်ပြခဲ့ ရင် အများစုက Allah ကို ယုံကြည်ပြဝတ်ဦးချမှာ သေချာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှစ်အတန် ကြာရင် ကုရအန်ထဲမှာရှင်းပြသလိုပဲ အံ့ဖွယ်တန်ခိုးတော်ကို မမြင်လိုက်ရတဲ့လူတွေက Allah မရှိဖူးလို့ငြင်းပြီး မပြီးဆုံးနိုင်သော သက်သေ
လက္ခဏာများ ပြရန်တောင်းဆိုနေကြဦးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ခေတ်အဆကဆက်မှလူသားများအတွက် အံ့ဖွယ်အတိ ဖြစ်တဲ့
မဖတ်ဖူးပဲ မဟုတ်ဖူးလို့ ပိတ်ငြင်းနေမဲ့အစား ရိုးသားဖြူစင်ပြီးအမှန်တရားကိုသိလိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုရအန် ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။
အံ့ဩပြီးချက်ခြင်း Allah ကိုဦးချပြဝတ်ပြုတဲ့ထိကုရအန်က
ကုရအန် သည် စမ်းခြင်တဲ့ဖက်ကစမ်း
အမှန်တရားအဖြစ်မှတ်ကျောက်အတင်ခံတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရိုးသားဖြူစင်ပြီးအမှန်တရားကိုသိလိုတဲ့ ပညာရှင်ကြီးတွေ အများအပြား Islam ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လာကြတာပါ။
တိုတိုနဲ့လိုရင်းကိုဆိုရရင် တမန်တော်မိုဟာမက် (PBUH)လက်ထက်တွင် ထူးခြားသည့် ဗျာဒိတ်တော်လာ ဖြစ်ရပ်များထက် ထူးခြားသည့် ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကို နောက်ဆုံးကောင်းကင်ကျ ကျမ်းအဖြစ် ဖန်ဆင်းရှင်ကလူသားအားလုံး သို့ ပေးသနားခဲ့ပြီး
ကုရအန် ကျမ်းတော်မြတ် ကို ယူဆောင်လာသူ တမန်တော်မိုဟာမက် (PBUH)်သည် ဖန်ဆင်းရှင်၏လူသားထုအားလုံးအတွက်နောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ထို ကျမ်းတော်မြတ်သည် နောက်ဆုံးနေ့အထိမှတ်ိကျောက်တင်မည့်သစ္စာတရားဖြစ်ကြောင်း
ထို့ကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်မရှိကြောင်း ငြင်းလိုသူများကိုကျမ်းမြတ်ကုရအန် က လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်လေးရာကတည်းက အံ့ဘွယ် တစ်ပါးအဖြစ် စာတစ်လုံး တစ်ပါဒမှမပြောင်းလည်းပဲ မှတ်ကျောက်အတင်ခံရန်အမြဲအဆင်သင့်ရှိနေ ပါတယ်။
အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်စေ မယုံကြည်သူများအတွက်ဖြစ်စေ သမိုင်းကြောင်းအရ အေဒီ ခြောတ်ရာစုတွင် အာရေဗျ တွင်မိုဟာမက်(PBUH)အမည်ရှိ စာမဖတ်တတ်သူလူသားတစ်ဦးက ကုရအန် ကျမ်းတော်မြတ် ကိုနှုတ်မှရွတ်ဆိုခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင်မပြောင်းမလဲရှိနေခြင်းကိုသမိုင်းအရမငြင်းနိုင်ပါ။
1. ကုရအန် ကျမ်းတော်မြတ်ကိုတမန်တော်မိုဟာမက်(PBUH)ကသိစိတ်နှင့်ဖြစ်စေမ
2.ကုရအန် ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအ ခြားလူသားတစ်ဦး၏ အသိညဏ်မှဖြစ်စေ ရှေးကျမ်းဂန်များမှကူးယူခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆ
3.ကုရအန် ကျမ်းတော်မြတ် သည်ဖန်ဆင်းရှင်မှလူသားအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သော ဗျာဒိတ်တော်ကောင်းကင်ကျ ကျမ်း အမှန်ဖြစ်သည်
Allah ၏ ငြိမ်းချမ်းသောမဟာကရုဏာ့ အားလုံးပေါ်သို့ကျရောက်စေရန်ဆုမွန်ပြုလျှက်